Ellicott® Brand Dredge Oo Loogu Talo Galay Mashruuca Macdanta Birta Dioxide-ka ee Fighteria- Ellicott Dredges
Kala Qaybinta Macdanta Waaweyn ee Waqooyiga Ameerika illaa Mine TiO2 ee Florida, USA ee DuPont
Source: Saxaafadda Macdanta
Ellicott Dredge ee DuPont - "SANDPIPER"
Dhererka burcadda 165 ft
Qoto dheer oo qodis ah 50 ft
Cabbirka tuubbo nuugida 23 ee ID
Cabbirka tuubada tuubada 23 ee ID
Roogga HP 2,000 (1491 KW)
Jar jar HP 1,450 (1081 KW)
Wadarta rakiban ee HP 4,800 (3579 KW)
Shirkadda Dupont ee Wilmington, DE, waxay isticmaaleysaa nooc cusub oo loo yaqaan 'Ellicott® brand dredge' oo loogu talagalay macdanta Titanium Dioxide (TIO2) ee gobolka Florida (USA). DuPont waa soo saaraha iyo macmiilka ugu caansan adduunka ee TiO2, iyada oo ay ugu wacan tahay baahiyaha sii kordhaya ee adduunka ee macdantaan ayaa bilaabay mashruuc malaayiin doolar ah oo lagu ballaarinayo howlaha macdanta ee u dhow Maxville, Florida.
Laba godod oo lagu rakibay qalab lagu farsameeyo macdanta ayaa hadda ka shaqeeya kaydadka Trail Ridge ee ku dhow. Iyada oo loo sii wado qoditaanka cusub iyo dhirta la xidhiidha, DuPont wuxuu cimriga miinada u dheereyn doonaa sannadka 2010. Riigagga ayaa u soo qulqulaya dhirta wax soo uruurisa ee kala sooca TiO2 iyo waxyaalaha kale ee kala duwan ee macdanta laga soo saaro ee dhinaca xeebta looga soo tuuro. Hadda waa dhaqan caadi ah in dabada la geeyo aaggii hore ee laga soo saaray. Barnaamijka deegaanka ee si taxaddar leh loola socdaa wuxuu hubiyaa in aaggii ka-go'ay dib loogu soo celiyo intii suurtagal ah sara-u-qaadkiisa iyo dhererkiisa asalka ah.
Qodaalka cusub, oo loogu magac daray "SANDPIPER" ayaa soo saari doona labada hawlgal ee jira marka la isku daro. Waxaa xeebta ku shaqeyn doonta 13,800-volt oo fiilada korantada ah oo soo jiidan doonta waxaana loo qaabeyn doonaa soo saarida 2,100 tan / saacaddii tiirarka TiO2. Waxay dhex mari doontaa 600 oo ft oo ah 23 inji. Dhuumaha Aqoonsiga ee warshadda urursan, iyadoo u sii dhaadheceysa ugu hooseysa ee 50 ft. Mashiinka 2,000 ee HP HP iyo 1,450 HP dambiil gooyuhu wuxuu noqon doonaa mashiinka-mashiinka tooska ah ee ay wataan mootooyinka hadda socda Wiishka jaranjarada iyo wiishka lulid waxaa sidoo kale wadi doona matoorrada DC. Ellicott's DC Drive systems waxay siisaa xakamaynta ugu fiican ee howlaha ugu muhiimsan ee qodista iyadoo la siinayo waxtarka sare iyo kalsoonida. Spuds-ka waxaa ku shaqeyn doona dhululubo hiddo-wadayaal ah, iyo gawaarida safarka ah ee ku shaqeeya silsiladda oo leh 20-ft stroke waxay fududeyn doontaa dhaqdhaqaaqa.
Waxaa laga daabacay Mining Journal